Nabadoonada Gobalka Sanaag oo ka hadlay socdaalkii Madaxweyne ee Gaas ee sanaag (dhegayso) – Radio Daljir
Nabadoonada Gobalka Sanaag oo ka hadlay socdaalkii Madaxweyne ee Gaas ee sanaag (dhegayso)
Seteembar 23, 2018 11:36 b 0
Afhayeenka Nabadoonada gobolka Sanaag nabadoon Cabdiqani Max’ud Faarax ayaa wareysi uu siiyey Radio Daljir waxa uu kaga hadlay safarkii Madaxweynaha Puntland C/wali Max’ed Cali Gaas uu dhawaan ku tagay magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag Bari. Safarkaas oo ahaa kii ugu horreeyey ee madaxweyne Puntland xil ka haya uu ku tago halkaas.
Nabadoon C/qani ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dareenka bulshada deegaanadaas ee la xiriira safarka madaxweynaha, sheegashada Somaliland ee gobolkaas, dilkii AU Suldaan Xasan Cali Jibriil iyo arimo kale.
Afhayeen oo jooga magaalada Baran ayaa khadka telefoonka ugu warramay Axmed Sh. Max’ed ‘Tallman’ oo ku sugan studiyeheena Daljir Bossaso.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Waxbarashadda DFS oo kulan la qaatay Maamulayaal dugsiyo (Sawiro)